Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. च्याम्पियन्स लिग : म्यानचेस्टर युनाइटेडद्वारा युभेन्ट्स पराजित – Emountain TV
च्याम्पियन्स लिग : म्यानचेस्टर युनाइटेडद्वारा युभेन्ट्स पराजित
एजेन्सी, २२ कात्तिक । यूएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा इंग्लिश क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडले इटालियन क्लब युभेन्ट्सलाई उसैको मैदानमा पराजित गरेको छ ।
खेलको अन्तिम ५ मिनेटमा दुई गोल गरेपछि म्यानचेस्टर युनाइटेडले यूईएफए च्याम्पियन्स लिगमा इटालियन च्याम्पियन युभेन्ट्सलाई २-१ ले पराजित गरेको छ । युभेन्ट्सको घरेलु मैदानमा जित हात पारेसँगै युनाइटेडको दोस्रो चरणमा छनोट हुने सम्भावना पनि मजबुत भएको छ ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको उत्कृष्ट गोलमा युभेन्ट्सले खेलको ६५ औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो । लिओनार्डो बोनुचीको लामो पासलाई पहिलो प्रहारमै उनले पेनाली क्षेत्रभित्र बाट गोलमा परिणत गरेका थिए । युभेन्ट्सका लागि उनको यो पहिलो च्याम्पियन्स लिग गोल पनि थियो । त्यसअघि पहिलो हाफमा युभेन्ट्सका लागि सामी खेडीराको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्केको थियो । दोस्रो हाफमा पाउलो डिबालाको प्रहारमा पनि क्रसबार बाधक बन्यो ।
म्यानचेस्टर युनाइटेडले खेलको अधिकांश समय आक्रमणमा जान पाएन । युभेन्ट्सको दबाब निस्तेज पार्न व्यस्त देखिएको युनाइटेडले ८६ औं मिनेटमा अगता लिएको थियो । जुआन माटाले पेनाल्टी क्षेत्रको ठिक बाहिरबाट गरेको प्रहार गोलमा परिणत भएपछि खेल बराबरीमा पुगेको थियो । त्यसको तीन मिनेट पछि पाहुना टोली युनाइटेडले अग्रता लियो । एस्ली योङले प्रहार गरेको फ्रिकिकलाई एलेक्स सान्ड्रोले आफ्नै पोस्टको दिशा दिएपछि खेल युनाइटेडको पक्षमा पुगेको थियो ।
जितपछि समूह ‘एच’ को युनाइटेडले ४ खेलबाट ७ अंक जोडेको छ । र, समूहको दोस्रो स्थानमा छ । युनाइटेडको नकआउट चरण पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।
स्पेनीस ला लिगा: एट्लेटिको मड्रिड एट्लेटिको विल्बाओकोसँग पराजित